दैनिक मनतातो दुध पिउँदा जरैदेखि नष्ट हुन्छन् यी रोगहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
दैनिक मनतातो दुध पिउँदा जरैदेखि नष्ट हुन्छन् यी रोगहरु !!
दुधलाई आफैंमा सम्पूर्ण भोजन मानिन्छ । यसमा भएको प्रोटिन, फ्याट, क्यालोरी, क्याल्सियम, भिटामिन डी, बी–टु, बी–१२, पोटासियम, फस्फोरस र सेलेनियमजस्ता पोषक तत्वले आहारको गुणस्तर बढाउँछ । दुधलाई यदि चिसो पिउनुको साटो तातो बनाएर पिउने हो भने यसको गुण थप बढ्ने गर्छ ।
तातो दुधलाई कुनै पनि समय पिउन सकिन्छ । तपाईं चाहनुहुन्छ भने यसलाई स्वादिष्ट बनाउनका लागि केही मसलाको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तातो दुधको प्रत्येक कपमा लगभग १२ ग्राम प्राकृतिक चिनी हुन्छ जसले तपाईंको मांसपेशी र मस्तिष्कलाई बलियो बनाउँछ । साथै ८ ग्राम पूर्ण प्रोटिन हुन्छ जसमा सबै अमिनी एसिड हुन्छ । यसले तपाईंको मांसपेशीलाई शक्ति मिल्छ र यी बलियो हुन्छन् । यतिमात्रै होइन दुध पिउँदा शरीरको ऊर्जामा पनि वृद्धि हुन्छ । आउनुहोस्, मनतातो दुध पिउनुका फाइदा के छन्, त्यसबारे जानकारी लिऔं ।
ब्लड सुगर नियन्त्रित हुन्छः
राती बेडमा जानु अघि चिनी नहालिएको एक कप मनतातो दुध पिउनुहोस् । यसले ब्लड सुगरको स्तरलाई प्रबन्ध गर्न मद्दत मिल्छ, मुख्य रुपमा टाइप–वान डायबिटिज । जसको ब्लड सुगरमा उतारचढाव हुन्छ, उनीहरुले यो गर्नैपर्छ ।
मिठो निद्रामा सघाउः
तातो दुधले तपाईंको मन र शरीरलाई आराम दिन मद्दत गर्छ । बेडमा जानुभन्दा अघि एउटा तातो दुधको सेवनले मिठो निद्रा पर्न सहयोग गर्छ । यस्तो ट्रिप्टोफेन नामको पदार्थको उपस्थितीका कारण हुन्छ ।
तौल कम गर्न मद्दतः
एक गिलास मनतातो दुध, विशेष रुपमा सुत्ने बेलामा पिउँदा पेट लामो समयसम्म भरिने हुन्छ । यसले तपाईंलाई अबेर राती अस्वस्थकर खानाबाट जोगाउँछ जसले तौल बढाउने काम गर्छ ।
महिलाको हड्डी बलियो बनाउँछः
तातो दुध पिउँदा दुधमा भएको पोषण थप बढ्छ । तताउने प्रक्रियामा दुधमा भएको इन्जाइम सक्रिय हुन्छ र ती शरीरद्वारा अवशोषित हुन्छन् जसले हड्डीको घनत्वमा सुधार ल्याउने काम गर्छ । तातो दुध पिउँदा हड्डीको घनत्वमा सुधार आउँछ । तातो दुध पिउँदा हड्डीसँग सम्बन्धित रोग जस्तै अस्टियोपिनिया, अस्टियोपोरोसिस र फ्र्याक्चरको खतरा कम हुन्छ ।
दाँतलाई बलियो बनाउँछः
यदि तपाईं दाँत दुख्ने र सासको दुर्घन्धबाट तनावमा हुनुहुन्छ भने दैनिक तातो दुध पिउँदा वास्तवमै मद्दत मिल्छ । दुधले तपाईंको दाँतलाई बलियो बनाउँछ जसका कारण दाँत खराब हुने खतरा कम हुन्छ । दुधमा बायोएक्टिव कम्पोनेन्ट हुन्छ, जसले सूक्ष्मजीव बढ्नबाट रोक्छ ।
तातो दुधलाई कसरी बनाउने स्वादिष्ट ?
यदि तपाईं केही विशेष मसाला राखेर पिउन चाहनुहुन्छ भने यसले दुधको प्रभावकारीतालाई थप बढाउने गर्छ । तपाईंको पाचन दुरुस्त रहन र प्रतिरक्षा बढाउनका लागि तातो दुधलाई २ चिम्टी बेसार हालेर पिउनुहोस् । दालचिनी र अदुवाजस्तै बेसारमा पनि लाभकारी एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ । यसले इन्फ्लेमेसन हटाउन मद्दत गर्छ । (रातोपाटी बाट सभार)
तीन आमसमस्या, तीन सहज योग
एसइईमा ९० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थी प्रशस्तै